Tuugada kaararka bangiyada oo soo korortay | Somaliska
Tuugada kaararka bangiyada ayaa soo korortay sida lagu soo bandhigay afti ururin ay sameysay shirkada SIFO. Tuugadaan ayaa la sheegay in ay isticmaalaan nidaam loo yaqaan Skimming oo ay ku koobiyeeyaan kaararka dadka ka dibna ay isticmaalaan.
Arintaan waxay badanaa ka dhacdaa maqaayadaha iyo goobaha qofka uu kaarkiisa u dhiibo dadka wax iibiya kuwaasoo koobiyeeya nambarada kaarka si ay dib ugu isticmaalaan. Tuugada qaarkood ayaa isticmaala nidaam midkaas ka sareeya iyagoo qalab ku xira darbiyada lacagaha lagala baxo oo halkaas ku koobiyeeya kaararka dadka iyo nambarka sirta ay isticmaalaan.
10 kii qof 1 ayaa ka soo dacwooday sanadkii hore in kaarkiisa qaab tuuga nimo loo isticlaamay. Tuugadaan ayaa layska ilaalin karaa haddii qofka aad u dhiibeyso kaarkaaga uusan meel qarsoon la galin iyo in qofku iska fiiriyo darbiyada lacagaha lagala baxo.
Shirkadaha bangiyada ayaa iyagana si fiican u ogaada marka dukaan ay ka socoto hawshaan iyagoo eegaya dacwada ka imaaneysa macaamiishooda.
Qaxootiga waajib miyay ku tahay in ay Sweden u mahadceliyaan?
Soomaalida iyo guurka dhaqamada kale
Wiilkii Soomaaliga ah ee Mölndal ku dilay gabadha oo la sheegay in uu qaangaar yahay
July 20, 2011 at 17:57
asc jimcaale wallaalow sidee leyskaga ogaan karaa markaad derbi wax kala bexeyso sheekadan oo kale ayan waxan ku arkey dubai adigoo kaar soo iibsadey kadibna call boxka aad timaado ayaa waxa ku soo ag istaagaaya qof iska dhigaaya inuu adiga ku sugayo markaad dhameysato si uu asagana u galo ka dibna waxa dhacda in uu hal mar oo keliya ku xifdiyo lambarada aad garaceysid sidaasna uu ugu wareego mid kale oo aan kaa fogeyn halkaasna uu ku isticmaalo waa lagu ogaadey markii dambe balse kan wuxuu uga duwan yahey password ayuu kuu leeyahey sideen isaga ilaaliya markaan derbi wax kala baxaayo mahadsanid
July 20, 2011 at 19:29
Asslamu Calaykum : Walaal Jimcaale waan kaaga mahad naqaa , warkaan ka digtoonaanshaha mudan .
Shabakada aftonbladet ayaa warbixin caynkaana lagu soo daabacay , balse halkaan iyo halkaanba waan aqriyay waxaana faah faahin buuxda u waayay ….,.
Su;aal Walaal Manoo Sharixi kartaa haddii aad wax ka ogta Habka Darbiyada Loogu Koobiyaynaa Kaarka ?
Mahadsanid Kun iyo Koow jeer
July 20, 2011 at 22:24
Abuxudayfah iyo Omar inta aan soo aqriyay qaabka ay u sameeyaan waa dhowr nuuc, mar waxay isticmaalaan aalad ay ku xiraan meesha mishinga laga galiyo kaarka oo aqrineysa isla markaana koobi ku sameyneysa magaca iyo nambarka ku qoran kaarka iyagoo sidoo kale aalad kale ku xira meesha nambarka laga garaaco taasoo u eg xarfaha balse koobiyeyneysa afarta nambar ee sirta.
Xitaa qaarkood waxay sameeyaan in ay kaamiro ku xiraan darbiga oo sawiro ay ka qaadaan kaarka iyo nambarada dadku ay garaacayaan. Sida laisaga ilaalin karo waa in qofka uu taxadar sameeyo oo uu fiiriyo meesha uu kaarka galinayo iyo meesha uu nambarka ka garaacayo.
Bangiyo badan waxay ku soo sawiradaan darbiga sida ay u egtahay meesha kaarka la galiyo iyo meesha lagu garaaco afarta nambar, haddii sawirka ay ka duwantahay wax ayaa qaldan.
July 21, 2011 at 01:13
ASC Jimale waan ku salaamay bacdul salaam walaalkeey waxaan rabi lahaa haddaad ii sheegi karto barnaamijkaad ku dhistay tiori/ga 10 suaalood ee boga ku jirta in aad ii sheegto magaciisa.
Aadba au Mahadsantahay Ustaad Jimcaale , sida qadarinta mudan ee aad Noogu so Jawaabto.